ओली सरकारकै पालामा तीन पटक बढ्यो पेट्रोलको मूल्य - Himalayan Kangaroo
ओली सरकारकै पालामा तीन पटक बढ्यो पेट्रोलको मूल्य
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:०९ |
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याँस बाहेक इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ । शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३–३ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो । यस्तै, हवाइ इन्धनमा आन्तरिकतर्फ ५ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियमा प्रतिलिटर ७५ डलर बृद्धि भएको छ । शनिबार रातिदेखि पेट्रोलको मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलका लागि भने अब उपभोक्ताले ९५ रुपैयाँ तिनुपर्नेछ ।
भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले नयाँ मूल्यसूची पठाएसँगै नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । आईओसीले १५–१५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । निमगले अझै आफ्नो घाटा मासिक ३७ करोड भन्दा धेरै रहेको बताउदै आएको छ । गत १५ दिनको घाटा नै १८ करोड ६२ लाख पुगेको निगमको भनाइ छ । पछिल्लो पटक भारतीय बजारमा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महंगो भएको भन्दै भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । भारतीय बजारमा प्रतिलिटर पेट्रोललाई १ सय २४ नेपाली रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । त्यस्तै, भारतीय बजारमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १० नेपाली रुपैयाँ रहेको छ ।
ओली सरकार आएपछि यसरी तेस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको हो । पछिल्लो पटक वैशाख ३ गते पेट्रोलमा एक रुपैयाँ र डिजल र मट्टितेलमा दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाइएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १६ दिनपछि पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर दुई रुपैयाँ बढाएर प्रति लिटर १०५ रुपैयाँ बनाइएको थियो । त्यतिबेला डिजेल र मट्टितेलको भाउ बढाइएको थिएन । प्रति लिटर ८५ रुपैयाँ थियो डिजल र मट्टितेलको भाउ । अहिले नयाँ मूल्यमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रूपैयाँ ९० पैसा नाफा र डिजल र मट्टितेलमा १ रूपैयाँ २२ पैसा घाटा भएको निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतको भनाइ छ । त्यसैगरी, एलपीजी ग्यासमा ६४ रूपैयाँ २९ पैसा घाटा रहेको र निगमको मासिक नाफा २१ करोड रहेको गोइतको भनाइ छ ।
आयल निगमले आफु घाटामा गएकाले पेट्रोलको भाउँ बढाउँनु परेको बताइँरहदा सर्वसाधारण उपभोक्ता भने सरकार र निगमले सर्वसाधारणको ढाड सक्नेगरी बढाएको मुल्य बृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् ।
अहिलेको मूल्य बढ्नुमा डलरको वृद्धि र अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि प्रमुख कारण भएको निगमका निगमको भनाइ छ ।
एपीपीएमको नाममा नेपाल आयल निगमको मनोमानी
२०७१ सालदेखि नेपाल आयल निगम एपीपीएम अर्थात् स्वतः सञ्चालित मूल्य संरचना प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसप्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय बजार अनुसार संस्थानले आफैँ वस्तुको मूल्य समायोजन गर्न पाउने प्रावधान हुन्छ । निगमले पनि मूल्यवृद्धिको जानकारी गराउने क्रममा यही प्रणालीमा रहेर वृद्धि गरेको कुरा प्रेस विज्ञप्तीमै लेखिएकोे छ । अनि, प्रत्येक १५÷१५ दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने गरिएको पनि विज्ञप्तीमा बकाइदा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा भारतीय आयल निगम आईओसीले असामयिक मूल्यवृद्धि गरेकाले त्यसैअनुरुप नेपाली बजारमा मूल्य बढाइएको भनिएको छ ।
इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डले तयार पारेको स्वतः सञ्चालित मूल्य संरचना निर्देशिका अनुसार इन्धनको मूूल्यवृद्धि गर्नुअघि अन्तरराष्ट्रि«य बजारभाउको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिनुपर्छ । मूल्यवृद्धिका कारक तत्व र अन्य वस्तुसँगको सम्बन्धको अध्ययन र रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । मूल्यबृद्धिका घटकहरु अथवा कारक तत्वहरु प्रष्ट खुलाइनुपर्छ । खरिदमूल्य र बिक्रीमूल्यको अन्तर नाफा वा घाटाको अवस्था र वजारमूल्य अनुसार सरकारलाइ तिरेको करको विवरण समेत मूल्यवृद्धिका क्रममा उल्लेख गरिनुपर्छ । अनि, अन्तरराष्टिय बजारमा इन्धनसँग सम्बन्धित अन्य वस्तुहरुको मूल्य बढेमा त्यसकै आधारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि गरिन्छ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा अटोप्राइसिङ मेकानिजम प्रणालीको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएको पत्र पठायो भन्दै रातारात इन्धनको भाउ बढाइन्छ न कुनै अनुसन्धान न सरकारसँगको सहकार्य । यतिसम्मकी निगमको निर्देशिकामा समेत कुन अवस्थामा र के आधारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । बरु, एकैपटक इन्धनको भाउ आजैदेखि यति बढेको भन्दैे भन्दै पेट्रोल पम्पहरुमा मूल्यसूची झुन्ड्याइन्छ । अनि भनिन्छ ः इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्नु निगमको बाध्यता हो, परिस्थितिलाई बुझिदिनुपर्याे ।
तर, नेपाल आयल निगमको यो रवैया देख्दा लाग्छ, उपभोक्ताले बुझ्ने होइन निगमले अटोप्राइसिङ मेकानिजमका मापदण्ड बुझ्नु जरुरी छ । किनकी, बलियो अर्थतन्त्र भएका विश्वका धेरै मुलकुमा यो प्रणली अभ्यासमा छ । तर, ती मुलुकहरुमा एक महिनामै दुईपटक इन्धनको मूल्य चुलिँदैन, नेपालमाझैँ । अनि ‘हाम्रो बाध्यता’ भन्दै लाचारीपना पनि देखाउँदैनन् ती मुुलुकका आयल निगमले । अनि एपीपीएमका नाममा नेपाल आयल निगमले विना तयारी अन्धाधुन्धा गरेको इन्धनको मूल्यवृद्धि जनताको ढाड सेक्ने कारक नभनेर के भन्ने त ?
विद्यार्थी संगठनको बदलिदो स्वर
विपक्षी दलको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई खबरदारी गर्दा भूईचालो नै ल्याउलाजस्तो गर्छन् । कहाँनिर गल्ति गर्ला र समातौला भइरहन्छ, कार्यकर्ता र विपक्षिलाई । तर, आफ्नो सरकार भएका बेलामा जस्तासुकै गल्तीलाई पनि नदेखेजस्तो गर्छन् । छिनका छिन नेताहरुको नैतिकता भुइँमा खसेको पत्तो आफैले थाहा पाउँदैनन् । प्रसंग हो, विघटित तत्कालीन नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुकी पूर्व अध्यक्ष नविना लामा र उनकै नेतृत्वको विदार्थी संगठन अनेरास्ववियुको । अहिले लामा समानुपातिक तर्फका सांसद पनि छन् ।
अनेरास्वियुको नेतृत्वमा लामाले देश र जनताको विपक्षमा कार्य गर्दै आएको भन्दै विपक्षि सरकालाई खवरदारी गन चर्का भाषणदेखि नारा जुलुस र ठूला ठूला आन्दोलन गरिन् । गत वर्ष देउवा सरकारले नेपाल आयल निगम घाटामा गएकोे भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा २ रुपैया मुल्य बृद्धि मात्र के गरेको थियो, अनेरास्वियु र अनेरास्वियु क्रान्तिकारीले नारा जुलुस मात्रै लगाएनन् । नालायक सरकार भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पुत्ला समेत जलाए । सोही क्रममा अनेरास्वियु र प्रहरीबीच झडप हुँदा अनेरास्वियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाको टाउँकै फुट्यो ।
उतिवेला नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । देउवा सरकारविरुद्ध विद्यार्थीहरुले सडकदेखि समाजीक सञ्जालका भित्ता तताए । नविना लामा खुंखार मूल्य वृद्धिको विरोधमा उत्रिइन् । उनले फेसबुकमा निकै कडा प्रतिक्रिया दिइन् । उनले त्यतिबेला देउवालाई अपशब्द नै बोलिन् । उनले कमिशन खाने उद्धेश्यले हप्तैपिच्छे मुल्यवृद्धि गरेको आरोप पनि लगाइन् । र, नालायक देउवा सरकार राजीनामा दे भन्दै यस्तो स्टाटस पोष्ट गरेकी थिइन् । उनको यो स्टाटस त्यतिबेला मात्रै होइन, अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । र, सोधिएको छ सांसद नविना लामालाई । पाँच पाँच पटकसम्म मुल्यबृद्धि हुदापनि कमरेडलाई जानकारी छ की छैन ? २ रुपैया वृद्धिहुदा पनि उ वेला त यस्तो लेखिएको थियो नि । जनताको पक्षमा राजनीति गरेको हो भने आफ्नै सरकारको विपक्षमा बोल्ने हिम्मत छ ? यस्तै पश्न र आक्रोसले सामाजीक संजालका भित्ता रंगिएका छन् ।
सामाजीक संजालमै यसरी भाइरल बनेको छ, अनेरास्विवियुका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्थात तत्कालीन उपाध्यक्ष महेश बर्ताैलाको यो तस्वीर । तस्विर पोष्ट्याउदै भरत महतरा लेख्नु हुन्छ । केही महिना अगाडी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ १.८४ पैसा बढाउँदा आन्दोलनमा उत्रिएको अनेरास्विवियु अनि उपाध्यक्ष दाजु महेश बर्र्ताैला, महासचिव दाजु ऐन महर लगाउत दर्जनौ नेताकार्यकर्ताहरुको यो हालत भयो । अहिले १३ रुपैया बढाउदा किन मौन ? हाम्रलाई प्राथमिकता दिने कि राम्रालाई ? जनता जान्न चाहन्छन् । यसरी नै धेरैले सामाजीक संजालमा अनेरास्ववियु प्रति आक्रोस पोखेका छन् ।
तर, अहिले अनेरास्ववियु लगायत सांसद नविना लामाले समेत हालै जारी गरिएको संघीय बजेट सबैभन्दा उत्तम र अहिलेसम्मकै सबल भनेकी छिन । तर, सांसद लामाले बोलेको साँचो हो कि झुठो हो उनै जानुन् । अब प्रश्न उनी सामु नै तेर्सिन्छ । केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच पटक मूल्यवृद्धि भइसक्यो । नबिना केही बोलेकी छैनन् । बोलेकी छन् त यो सरकारले पाँच वर्षभित्र सबैलाई समृद्ध बनाउँछ । पाँच पटकसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा पनि यस सम्वन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले विद्यार्थी संगठनपनि लम्पसारवादी नै हुन भन्दा दुइमत नहोला ।
Previousअष्ट्रेलियामा प्रोफेसनल एकाउन्टिङ पढाइ : कोर्स, भर्ना प्रक्रिया र पढाइपछिको अवसर
Nextविकासको गति तीव्र हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली
कोरला नाकामा नेपाल-चीन व्यापार मेला
१ असार २०७४, बिहीबार १२:३३
२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०३:३९